Ngenisa owakho Martech Zone Inqaku | Martech Zone
Ngenisa owakho Martech Zone inqaku
Nceda ungabuzi ukuba ungangenisa inqaku, nje Ngenisa inqaku apha. Andinaxesha lokujonga kwakhona izicelo.
Ndinephakheji ehlawulelweyo yokwandisa ukufikelela kwebrendi yakho nayo:
Ukuba injongo yakho ukuxhuma umva, ndicela uhambe.
Kufuneka ukuba ibe yitekhnoloji yokuthengisa. Ayizizo iindaba ezihlanganisiweyo, unyuselo, okanye utyalomali
Iinkcukacha: Amagama angama-700 ukuya kuma-2,000, chaza ingxaki, ezona ndlela zilungileyo zokusombulula ingxaki, kunye nesishwankathelo sesisombululo sakho. Faka ikhonkco apho umntu angathatha inyathelo elilandelayo-idemo, ukhuphelo, njl.
Izikrini, iidayagramu, ilogo kunye nevidiyo zonke ziyacetyiswa (ubuncinci).
Isicatshulwa esivela kumsunguli okanye inkokeli yokucinga ngaphakathi kwenkampani kukuchukumisa.
Ityala lokusebenzisa okanye ibali lomthengi linamandla amakhulu.
Ukuba ungathanda ukuba ngumbhali, kufuneka sibene Idilesi yemeyile esebenzayo yombhali (ayisiyo-PR firm) kwaye kufuneka babhaliswe kunye nefoto IGravatar okanye ifoto ifakiwe.
Uvumelekile ukuba ubandakanye umnxeba wesenzo esibuyele kwindawo yakho kwisiboniso, ukhuphelo, njl njl.
Ukuba ungathanda ukudibanisa isixhobo, sazise. Sinezixhobo ezininzi ezinezivumelwano zokudlulisa kwezo nkampani.
Nanku umzekelo oqinileyo esisebenze nawo I-Software-On Software.
Sikhululekile ukuhlela umxholo, ukuwufomatha, ukuwususa, ukuwuhlaziya, ukuwuthumela kwakhona, okanye ukwenza enye into ngawo ukuqinisekisa ukuba silugcina upapasho olusemgangathweni lwabafundi bethu.
Ngaphambi kokuba ungenise*
Ngokuthumela le fomu, uyavuma ZONKE ezi zinto zilandelayo.
Andihlawulwa ngokubeka i-backlinks ukuphucula umgangatho wokukhangela
Ndithumela inqaku lokuqala elingazange lipapashwe okanye lisasazwe kwenye indawo
Ndiyaqonda ngokuhambisa lo mxholo ukuba unokuhlelwa okanye ususwe nangaliphi na ixesha ngaphandle kwemvume yam
Ndiyaqonda ukuba akukho siqinisekiso sokuba inqaku liya kupapashwa okanye ixesha lokupapashwa
Inkampani, iMveliso okanye iNkonzo*
Ngaba uyabandakanya inqaku lokwenyani?*
Onke amanqaku kufuneka abe yi-100% yoqobo kwaye angabhalwa kuyo nayiphi na enye indawo. Kuya kufuneka ufake igama lombhali, idilesi ye-imeyile, kunye nentloko.
Hayi - esi sicelo siza kucinywa.
Ewe-ndiyincamathisele kuyo yonke into oyicelileyo.
Ewe- kodwa siyafuna Douglas Karr ukuba ngumbhali
Idilesi ye-imeyile yombhali
Iimpawu zombhali ngekhe zamkelwe ngaphandle kwedilesi yemeyile ethe ngqo yombhali. Akukho ngaphandle.
Umbhali LinkedIn URL
Izivakalisi ezi-2 ukuya kwezi-4.
I-headshots, ii-logos, i-Screenshots kunye / okanye uxwebhu
Iifayile ezamkelweyo: jpg, gif, png, doc, zip, docx, Max. ubungakanani befayile: 50 MB.
Nawaphi na amanqaku asemgceni afuna igama lokwenyani, idilesi ye-imeyile ethe ngqo kumbhali, isentloko, kunye nesigwebo esi-2 kuye kwesine. Sinokubandakanya naziphi na iidilesi zeprofayili yoluntu. Nceda zip kwaye ulayishe.
Ngaba unayo isithembiso okanye ubiza isenzo?*
Ukuba ubonelela ngesithembiso kwinqaku lakho, uya kufumana impendulo engcono. umz. Sebenzisa ikhowudi MARTECHZONE nge-10% isaphulelo. Nceda unikeze indawo yokuya kuyo.
Ukuba unenkqubo yokuzibandakanya nathi sinokujoyina, kunokwenzeka ukuba sikupapashe oku.
Ngelixa ulapha ...
Ngaba ungathanda ukubhalisa kwincwadana yethu?